Reading oo u Soo Baxday Semi-finalka Koobka FA Cup-ka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Reading oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa caawo u soo baxday Semi-finalka kooxda FA Cup-ka,ka dib markii ay garoonkeeda Madejski Stadium 3-0 uga badisay kooxda Bradford City oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska.
Labadan kooxood ayaa ciyaartii hore ku soo kala baxay bareejo 0-0 ah.
Kooxda Reading ayaa waxaa sedaxda gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Hal Robson-Kanu, Garath McCleary iyo Jamie Mackie.
Ciyaaryahan Felipe Morais ayaa qeybii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Bradford City.
Kooxda Reading ayaa markii u horeysay ilaa sanadkii 1927-dii u soo baxday Semi-finalka kooxda FA Cup-ka,waxana ay garoonka Wembley kula ciyaari doontaa kooxda Arsenal.
Taageerayaasha kooxda Reading ayaa garoonka soo galay markii ay ciyaarta dhamaatay,si ay ugu dabaal dagaan guusha ay soo hooyeen ciyaartoyda kooxdooda.
Sampdoria oo Ka Adkaatay Kooxda Roma